(tonga teto avy amin'ny Polinezia)
I Pôlinezia dia faritra ao atsinanan'i Ôseania izay ahitana nosy maro dia maro. Ny nosy sy ny tamba-nosy mamaritra ny sisiny dia ny tambanosin'i Hawaii ary avaratra, ny Nosin'ny Paska any atsinana ary Zelanda Vaovao (New Zealand, Aotearoa) any andrefana.
Ny telolafin'i Polinezia
Avy amin'ny teny grika hoe πολύς / polús ("maro") sy νῆσος / nễsos) ("nosy") ny teny hoe Pôlinezia ka midika ara-bakiteny hoe "nosy maro".
Miteny amin'ny fiteny aostrôneziana ao amin'ny zana-bondronm-piteny ôseaniana, atao hoe fiteny pôlineziana, ny Pôlineziana.
Amin'ny mponina miisa 5 tapitrisa (ny 4,5 ao Haoay sy Zelanda Vaovao, izay tsy Pôlineziana ny ankamaroany) i Pôlinezia dia ahitana faritra ara-pôlitika miisa 20.
Misy faritra miankina telo ambin'ny folo koa ny ao, dia:
i Haoay, Samôa amerikana , i Johnston, i Baker, i Howland, i Jarvis, i Palmyra (miankina amin'i Etazonia);
Pôlinezia frantsay, Wallis-et-Futuna (miankina amin'i Frantsa);
ny nosy Chatham, Tokelau (miankina amin'i Zelanda Vao);
ireo nosy Pitcairn (miankina amin'ny Fanjakana Mitambatra);
ny Nosin'ny Paska (miankina amin'i Sily).
Ny 90%n'ny velaran-taninireo faritra ireo dia rakotra ranomasina fa ny 10% fotsiny no tany maina.
I Pôlinezia frantsay (amin'ny fiteny frantsay: Polynésie Française, amin'ny fiteny tahisiana: Pōrīnetia farāni) dia faritra andafy frantsay izay ahitana an'i Tahiti, ny Îles de la Société. Faritra mizakatena i Pôlinezia ary manana ny filohany, frantsay, ary ny governemantany. Tsy ny vola euro ihany koa no ampiasainy any fa ny Franc CFP.
Ny renivohiny dia Papeete, eo amin'ny nosin'i Tahiti. Teny frantsay no teny ôfisialy any, ny teny tahisiana (Reo Ma'ōhi) dia teny miasa andavanandro miaraka amin'ny teny frantsay, izay ampiasaina any am-pianarana.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Pôlinezia&oldid=999779"
Dernière modification le 3 Janoary 2021, à 12:53
Voaova farany tamin'ny 3 Janoary 2021 amin'ny 12:53 ity pejy ity.